ဖုန်း မှာ application တွေကို Lock ချဖို့အတွက် Super Application lock apk ~ မိုးညိုသား
ဖုန်း မှာ application တွေကို Lock ချဖို့အတွက် Super Application lock apk
ကျနော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် လုံခြုံရေးလေး တခု့ပေးချင်ပါတယ်။
မိမိ ရဲ့ ခွင့်ပြု့ချက်မရှိပဲနဲ့ ဖုန်းခေါ်လို့မရအောင် ဖုန်းနားထောင်လို့မရအောင်လုပ်မယ်။
ကင်မရာ ဖွင့်ပြီး သုံးလို့ မရအောင်လုပ်မယ်။
ဖုန်း contact list မှာ ဘယ်သူတွေ ရှိတယ် ဆိုတာ မသိစေချင်လို့
ပေးမကြည့်ဘူး ဆိုရင်လည်း ရတယ်။ Private sms တွေ ကို မကြည့်အောင် သိမ်းမယ်။
နောက်တခု့ က လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ Email တွေကို
ဘယ်သူမှကြည့်လို့မရအောင် Lock ချထားဖို့အတွက်ပါ ။Lock လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ်။
Lock ကို PatternLock နဲ့ Digital lock ဆိုပြီး ပုံစံ ၂ မျိုး နဲ့ အသုံးပြု့လို့ရပါတယ်။
အသေးစိတ်ကို အောက်မှာ ဆက်လေ့လာလို့ရပါတယ် ခင်ဗျ
ဆော့ဝဲလေးကို အသုံး ပြု့မယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဝင်ဒေါင်းသွားလို့ရပါတယ်
Super lock to protect your privacy! Application lock, no longer have to worry about someone else on your cell phone ataglance.
Application lock can even lock the call, to prevent others to answer your call.
Simple operation, click Apply the list lock switch for the application lock or unlock.
Both digital lock and pattern lock unlock, self-defining unlock pattern, password, and the password prompt
Password reset, set the security question and answers answered correctly secret security problem, when you forget your password, you can reset your password.
More custom content preferences, quickly try it.